Qarax ka dhacay Hama - BBC Somali
Qarax ka dhacay Hama
20 Oktoobar 2013
Image caption Qaraxa ka dhacay Hama ayaa dilay ilaa soddon askari.
Baabuur ayaa ku qarxay bartamaha magaalada Hama ee Suuriya, iyadoo ay dhinteen ugu yaraan soddon qof. Wakaalada wararka ee dowladda ayaa sheegtay in baabuur uu ka buuxo hal iyo bar tan oo waxyaabaha qarxa ah, uu ku qarxay bariga Hama jid wayn oo ay baabuur ka buuxdo.
Weerarka ayay dowladda ku eedeysay inay ka danbeeyeen argagixiso. Dadka ololeeya ayaa sheegaya in baabuur uu ku qarxay fariisimo milatari, dadka dhintayna ay yihiin askar. Weerarkan ayaa yimid maalin kadib markii mucaaradka ay bambaano ku weerareen Dimishiq oo ay ku dhinteen lix iyo toban qof.